Eswatini jidere n'etiti Taiwan na China pụtara oke ihe egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Eswatini jidere n'etiti Taiwan na China pụtara oke ihe egwu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mgbe alaeze udo dị n'Africa na-atụ ụjọ, o yikarịrị ka ọ ga-aba mbara. Na Alaeze nke Eswatini nwere ike ịbụ na China Taiwan agha. China choro ochichi ohuru na Eswatini - ma ugbua enwere ike ibu oge ndi komunizim a ime anwansi.
Ọnọdụ dị jụụ ugbu a na isi obodo Eswatini bụ Mbabane nke nwere ụlọ ahịa emechiri emechi na n'okporo ámá ndị na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ịgbachi nkịtị tupu oke ifufe zuru oke.
Dabere na isi ndị agha ndị ọzọ na-eweta mgboagha na Isi Obodo Eswatini.
E wezụga ndị na-eto eto na-eme ngagharị iwe chọrọ inweta ikike karịa mba ahụ, enwere ike ịnwe ike isi na-arụ ọrụ ọnọdụ ahụ na ndabere. Ike a nwere ike ịbụ ndị Peoples 'Republic of China.
Walter Mzembi, onye bụbu mịnịsta mba ofesi nke Zimbabwe ma mara maka ọmụmụ ihe ala Africa na-eche, China nwere ọtụtụ ihe iji hụ Eze Eswatini apụla.
Ọ bụghị ihe ndabara na United States na-ewu otu n'ime ndị nnọchi anya mba kachasị na ụwa na obere obodo a Eswatini. Ihe kpatara ya gụnyere Taiwan na China.
Ajụjụ buru ibu nwere ike ịbụ China na ọchịchọ nke ike ụwa a iji belata mmetụta nke mpaghara ya na-agba ọsọ na Taiwan, nke a makwaara dị ka Republic of China.
Gọọmentị ọhụrụ na Eswatini ga-agbanwe n'ezie n'ịghọta ndị Republic of China karịa Republic of China, nke a maara dị ka Taiwan. China ga - ahụ nke a n'anya - ọ dịkwa mkpa na ike ọchịchị Kọmunist. Eswatini bụ naanị mba Africa nwere mmekọrịta mmekọrịta mba na Taiwan.
Ya mere, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ndabara na Communist Party nke Eswatini taa gosipụtara na Onye isi ya, Eze Mswati III gbapụrụ mba ya ma kwuo na ọ nọ na Johannesburg, South Africa. Onye na-eme ihe praịm minista nke Alaeze ahụ gọnahụrụ nke a.
E kwuru na Eze ahụ hapụrụ n'etiti ngagharị iwe ọchịchị onye kwuo uche ya na-aza alaeze nke nde mmadụ 1.16 na ụbọchị ole na ole gara aga.
Eswatini bụ onye otu United Nations, Commonwealth of Nations, African Union, Ahịa Azụ maka Ọwụwa Anyanwụ na Ndịda Africa, yana ndị Botswana South African Development Community.
Ndi mmadu Republic of China mara na ha nwere nnukwu ikike na SADC. Fọdụ na-ekwu na South African Development Community enwekwaghị mkpa, na-akpasu China iwe.
Maka gọọmentị China, uru nke iso Afrika na-apụta doro anya. China ejiriwo ntinye ego ya na Africa nweta ohere inweta akụrụngwa akụrụngwa dị na kọntinent, gụnyere mmanụ, ọla ndị dị oke ọnụ, na mineral dị mkpa maka mmepụta teknụzụ na-apụta dịka batrị ụgbọ eletrik.
Afrịka na-anọchikwa anya ahịa mara mma maka ụlọ ọrụ ihe owuwu China, nke na-eche oke ikike n'ụlọ ma na-achọsi ike ịchọta ụzọ ọhụụ ọhụrụ.
Agbanyeghị, ọtụtụ oge elele ọrụ ndị a anaghị erute na ndị ọrụ nchekwa Africa. Ntinye ego nke China maka oru akụrụngwa nke Africa na-abịarukwa ihe achọrọ ka mba ndị binyere ego họrọ ndị na-eweta China, na-eme ka o siere mba ndị ọzọ ike, gụnyere United States, isonye na ọrụ akụrụngwa nke Africa.
Beijing nwekwara ike leverage ya njikọ aka n'Africa n'ime nkwado na
mba ụwa. Dịka ọmụmaatụ, China ejirila ọnụnọ ya n'Africa wezuga Taiwan n'ọchịchị. Mba Africa niile, ewezuga Eswatini, anabatala Beijing na Taipei. Ndị isi Africa ekwuputala nkwado ha maka ókèala Beijing na South China Oké Osimiri ma kwuo okwu ihu ọha na nkwado nke Beijing n'oge ngagharị iwe 2019 na Hong Kong.
Nsonaazụ afrịka agwakọtara. Ọ bụ ezie na Africa nwere nnukwu mkpa maka
akụrụngwa nke na-adịgide adịgide, ọrụ ndị a na-ahọrọ ego China site n'ụzọ pụtara ìhè, na-eme ka nsogbu nrụrụ aka ka njọ. Ọzọkwa, ego ndị China na-eweta n'ụgwọ, na-atụnye ụtụ na enweghị nkwalite nke ụgwọ n'ọtụtụ mba Africa.
Omume ịgbazinye ego a edugala na ebubo nke colonialism ọhụrụ, na nsonaazụ nke akụ na ụba akụ na ụba site na ntiwapụ COVID-19, mba Africa na-arịwanye elu maka enyemaka ụgwọ.
China ka gbachiri nkịtị maka arịrịọ ndị ahụ, na-ajụ ajụjụ ma
United States na ndị ọzọ na-enye onyinye mba ụwa ga-ahapụ ụgwọ ahụ.
Ọ bụ ezie na China ekwusara ozi ọma ahụike ọha na eze na-enyere ndị mmadụ aka na Africa n'oge a
COVID-19 ọrịa na-efe efe, ọtụtụ ndị Africa nwere obi abụọ ma gosipụta nchegbu na akụrụngwa China nyere nwere ike ọ gaghị adị mma.
Ala eze Eswatini bụ otu n’ime obodo iri na ise na-anabata Republic of China, nke a makwaara dị ka Taiwan Ọ bụ naanị mba dị n’Africa na enweghị mmekọrịta mmekọrịta mba na ndị Republic of China.